Ònye ka m'bu? Part 1: Mara mma Ma Tiwara — njem Lee - Official Site
Chee echiche banyere The Bourne Identity. Nwoke a kpọtere elu on a ụgbọ mmiri na-adịghị ma onye ọ bụ. Ọ na-achọpụta a aidia na-aga Switzerland. Ọ na-akawanye na a ọgụ ma ghota na ọ na-zụrụ azụ ọgụ. Agaghị na-enwe crazy ọ bụrụ na ị na-enweghị usoro chọpụtara na i nwere nzuzo ninja nkà? N'ihi na ike nke ihe nkiri, ọ bụ na a na njem na-achọpụta onye ọ bụ. Ọ bụ ike nke na ihe ọ mere, onye banyere. Ma ọ bụrụ na ọ maghị ya, ọ ga-enwe ike ibi ndụ dị ka ọ dị n'ezie.
M ghara iche onye ọ bụla n'ime ụlọ a nke nwere nzuzo ninja nkà, ma ọ bụ ka mkpa ka anyị na-eche banyere anyị amata na.
Olee otú anyị na-aghọta anyị amata na nwere ọtụtụ ihe na-eme na otú anyị si arụ ná ndụ anyị. Echere m, ị maara onye ị bụ dị ka ihe mmadụ? Kedu ihe nke ahụ pụtara? Ị maara ihe mere ị ebe a, ihe gị uf, ihe ị na-eru nke, ihe ị na-kwesŽrŽ na-eme? Gịnị mere i ji adị? Onye ka ị bụ? Ọ bụrụ na anyị anaghị aza ajụjụ ndị a anyị nwere ike imefusị ndụ anyị, ndụ dị ka onye ọzọ.
Ọ bụ ihe ihere mgbe pro-eme egwuregwu ina merụrụ ahụ ma ọ bụ nwere na ịla ezumike nká, na mgbe ahụ na ha na-efu n'ihi na ike nke ndụ ha. N'ihi na ihe niile a na oge ha chere ihe ha bụ na ịbụ onye na-eme egwuregwu. Nke ahụ bụ otú ndị ọzọ si mesoo ha, na ọ bụ ihe ha nakweere. Ya mere, ọ bụrụ na nke ahụ bụ onye ha na-, ahụ bụ ihe ha ga-awụpụ ndụ ha. Na now na ọ na-arahụ na ha nwere ihe ọ bụla na-ebi ndụ n'ihi na.
Na e nwere ndị na-eto eto ladies na-aga site ná mma ka mmekọrịta, onye-amasị ha dị. N'ihi na ha chere ihe ha bụ ka a chịkọtara ịbụ ndị mara mma girl na ụmụ okorobịa dị ka. Na mgbe na-ewu ewu ahụ na-akwụsị, ha na-echi ọnụ n'ala. Nke ahụ bụ ebe ha hụrụ na nzube ha. Ọ bụrụ na ị na-mgbagwoju anya banyere onye ị bụ, ị ga-mgbagwoju anya banyere ihe ị ga-eme na ndụ gị-na na nwere ike mwute na ya pụta.
Gịnị ka ị ga-ekwu ma ọ bụrụ na m jụrụ gị onye ị bụ? -Amụrụ ma ọ bụ na-eme egwuregwu ma ọ bụ rapper ma ọ bụ pastọ? No, ndị nwere ihe ndị ị na-eme. Onye ka ị bụ?
Anyị nwere ike ka ụwa kọwaa anyị. Anyị nwere ike ka ndị enyi anyị kọwaa anyị. Anyị nwere ike ka nne na nna anyị kọwaa anyị. Anyị nwere ike ikwe ka Chineke kọwaa anyị n'ihi na Ya onwe Ya bụ ikike na okwu. Ọ bụrụ na anyị amaghị ndị anyị bụ, anyị apụghị ịdị ndụ ndụ otú anyị e bu n'uche na-ebi ndụ.
Na m nwere ike na-ekwu banyere otu nde ihe Akwụkwọ Nsọ kwuru banyere anyị, ma aghaghị m kee ya ụzọ atọ. Onye mbụ na anyị Aga okwu banyere nke a nnọkọ bụ na anyị na-mara mma mere, ma agbajikwa. Nke ahụ bụ isi ihe a nnọkọ: anyị niile na-mara mma mere, ma agbajikwa.
Na m chọrọ ile anya Psalm 139 mbụ. Atụgharị e ma ọ bụrụ na ị nwere gị Bibles. Mgbe ị na-atụgharị na m ga-enye gị ụfọdụ nkenke ndabere.
Nke a dum Psalm bụ banyere otú Chineke maara ihe niile na juru ebe nile n'otu oge. Ọ maara mgbe David anọdụ ala nakwa mgbe O biliri. Ya maara ihe ya na-aga ikwu n'ihu ọ na-ekwu na ọ. Ọ bụ n'ebe nile n'otu oge. Ọ bụ n'eluigwe, Ọ bụ n'ụwa, Ọ bụ n'ebe nile. Devid na-eto Chineke n'ihi na.
Mgbe ahụ malite na amaokwu 14 ọ na-etokwa Chineke dị ka Onye Okike. Ọ na-enye anyị a aidia n'ime ndị anyị bụ.
M-eto gị n'ihi na m na fearfully na ebube mere; Ọrụ gị dị ebube, M maara na ọma. My etiti e zonahụghị gị mgbe mere m na nzuzo. Mgbe m na-kpara ọnụ ke ogbu nke ụwa, anya gị hụrụ m unformed ahụ. Ubọchi nile chiri m na e dere n'akwụkwọ gị tupu otu onye n'ime ha wee na-. (Psalm 139:14-16, NIV)
Chineke mere ka anyị. Nke ahụ bụ amalite nke anyị amata na, na anyị kwesịrị ibi ndụ na ìhè nke na-eme eme.
Anyị na-mere site na Chineke
Ugbu a, m anya isi ọtụtụ ndị n'ebe a n'abali a na-aghọta na Chineke bụ Onye kere anyị. Ọ dịghị onye n'ime anyị kere onwe anyị. N'adịghị ka ihe ọtụtụ na-ekwu, na anyị ebe a dabara ma ọ bụ ohere. Nke ahụ bụ otú anya-fetched na unbelievable. Anyị na-ama ụma Chineke kere. Ma nke ahụ bụ bụghị onye na-adịghị mkpa ihe. Ọ na-eme ka a dị iche ná ndụ anyị ma na-akpụzi anyị identities.
Ma m chọrọ ka ị were maka oge na Chineke ekeghị anyị. Ị na-ebe a site random ohere. E nweghị kpachaara anya nzube gị ịdị adị. Ugbu a gbalịa ịza ajụjụ, kedu ihe ị bụ ebe a maka? Ndụ anyị ida niile pụtara na uru mgbe ha na-aghọ a random mberede. Ọ pụtara na ezinụlọ anaghị n'ezie pụtara ihe ọ bụla, anyị omume na-enweghị isi, m ike na-enweghị nzube. Ọ bụ a mara mma mwute ụzọ ele ụwa. na dabara nke ọma, ọ bụ na-abụghị eziokwu. Onye Okike anyị ejiwo Onwe-ya nye anyị n'Okwu ya.
Ebe i si bia ekwu ọtụtụ ihe banyere onye ị bụ. Ya mere, ọ bụrụ na mụ ahụ a iju ngwaọrụ na m ike chepụta ihe na-eme na ya, onye bụ ndị kasị mma onye na-ajụ? Onye mere ka ọ. Ha nwere ike ịgwa m ihe ọ bụ na ihe ọ bụ n'ihi na. Anyị chọrọ ịnụ ha na Onye kere, onye mere anyị.
n'amaokwu 14, David kwuru na ya bụ "ụjọ na ebube." Gịnị ka ọ pụtara?
Gịnị ka ịbụ onye e ụjọ mere? Ọ pụtara na Chineke adịghị nnọọ atụfu anyị ọnụ. Ọ bụ ya mkpa. O mere ka anyị na-akwa nsọpụrụ na nrube. Ọ bụghị haphazard ma ọ bụ random. Gị-acha anụnụ anụnụ anya bụ na nzube, ma ọ bụ gị aja aja akpụkpọ, ma ọ bụ gị ogologo ụkwụ. Ha dum bụ na nzube.
Echetara m ịnọ na-art klas na n'etiti ụlọ akwụkwọ, na ihe niile m mere bụ jọgburu, ma ọ bụghị na nzube. E nwere ihe a nnukwu efere mama m ka nwere na adị n'ụlọ anyị. Ọ bụ ugliest ihe ị ga-ahụ. Ọ bụghị na m na ọ bụghị ike ime ka mma. Ọ bụ n'ihi na m ịma ezu banyere ya na-enye oge ya. M nnọọ chọrọ ọsọ ọsọ na rụchaa otú m nwere ike ikwu na ndị enyi m. Chineke adịghị enweghị usoro itu anyị ọnụ. O mere ya na oke-elekọta. Ọ nlezianya chepụta gị. Na-eche nke a ọkà ọkpụ, ọma chiseling pụọ ruo mgbe ya masterpiece mara mma.
Devid nāsi na ya nọ "ebube." Ọ pụtara o mere oké ọrụ. Anyị bụ ndị magburu e kere eke. Madu bu ihe ịrịba.
Ọ gara n'ihu ikwu, “Ọrụ gị dị ebube, Ama m na nke ọma.” Ọ na-etokwa Chineke n'ihi ọrụ ya ndị. Chineke bụ ihe ịtụnanya Okike. Ọ mere na-eju ihe. Na na anyị so ná ndị ọrụ dị ebube nke Chineke. N'ezie, anyị na-na kasị ebube-ha nile.
M na-eche ma ọ bụrụ na ị na a na-enye Chineke otuto na o tosiri n'ihi ọrụ ya ndị? Madu bu ihe ịrịba. Dọkịta na-ka na-agbalị ịghọta mgbagwoju usoro na-ahụ mmadụ. A afọ ole na ole gara aga m nwere a dọkatụrụ adọka na m akpa ume na-enweghị ike iku ume. M dina n'ụlọ ọgwụ bed, na dọkịta enweghị ike ime ihe ọ bụla n'ihi na m ahu na-ama ama-elekọta ya. Ụbọchị ole na ole mgbe e mesịrị m bụ ezi. Anyị bụ ndị na-eju. Anyị na-agbajikwa, ma ka na-eju.
N'ezie, ndị mmadụ nwere ike banyere ihe ụmụ anụmanụ nwere ike ime ka anyị nwere ike ọ bụghị, dị ka ụmụ anụmanụ nke nwere ike agba ngwa ngwa ma ọ bụ nwere ike kari. Olee otú anyị si mara na anyị na ndị kasị ebube nke ihe e kere eke?
Anyị na-kere n'onyinyo Ya! Ọ dịghị anụmanụ, ma ọ bụ osisi, ma ọ bụ ibé ala, ma ọ bụ na mbara ala na-kere anyị n'onyinyo Chineke. O mere ka anyị dịrị ka Ya! Chineke kere ihe niile na-egosi mmeri Ya otuto, na na anyị na akụkụ nke ihe e kere eke na-akawanye na-egosi ya anya n'ụzọ kasị doo anya, n'ihi na anyị na ndị akụkụ ahụ mere ka ya.
Ugbu a, chee banyere na. Nke ahụ bụ nzube gị bụ isi ná ndụ: na-egosi mmeri Chineke. M na-agụ otu onye edemede na tụnyere anyị awụ. Anyị na-dị ka akpụ nke Chineke na ihe e kere eke. Na anyị na Chineke, ma anyị na dị ka ya. Anyị na-anọchi anya ya na anyị ga-esi gosi na a nta foto nke ya. Na-amasị m na image.
Gịnị mezie? Omenala bụ mgbe niile na-ezi gị na-discontent. Gị mkpa a. Na ị bụghị ezigbo ezu, buff ezu, taa ahụ ezu, nwoke mara mma ezu, smart ezu, ma ọ bụ egwuregwu ezu. Ọma na ị bụghị zuru okè, ma unu na-fearfully na ebube mere.
Achọrọ m ka ị nweta afọ ojuju na na. The ụmụ okorobịa ma ọ bụ agbọghọ nwere ike ọ gaghị na-ele gị mara mma, ma, ị ma na ihe ị na fearfully na ebube mere. O nwere ike ịbụ na smartest, ma unu na-fearfully na ebube mere. Gị njakịrị nwere ike ịbụ corny, ma unu na-fearfully na ebube mere. Ị bụ a magburu, ịtụnanya, ịrịba kere eke nke pụrụ ime ihe nile Chineke. Na ihe ọ bụla pụrụ ime bụ pụọ!
Ụfọdụ n'ime anyị na-eche kwa nta nke onwe anyị. Anyị na-eche na anyị na-na na ihe ọ bụla. Nke ahụ bụ ụgha. Ị na-fearfully na ebube mere. Ekwela ka onye ọ bụla agwa gị na uzọ ọzọ. Ihe Chineke na-eche ihe a ọtụtụ ihe karịa ihe ị ma ọ bụ ndị ọzọ nwere ike iche.
Ụfọdụ n'ime anyị na-eche nnọọ nke anyị onwe anyị. Chee echiche banyere Kanye West. Ọ na-akawanye na a mfịna, Ma ihe bụ na ọ na-ekwu ihe onye ọ bụla ọzọ na-ama na-eche. O nwere a song akpọ "Abụ m chi." N'ihi ya, ọtụtụ ndị na-eche nke a ukwuu nke onwe ha. Ma ị bụ nnọọ a e kere eke. Chineke bụ nanị ya bụ Onye Okike.
Nke a na-nwere pụtara n'ihe otú anyị na-ahụ ndị ọzọ. Ọ dịghị onye bụ abaghị uru. Ọ dịghị onye bụ ntakịrị. Onye ọ bụla na-fearfully na ebube mere. Mgbe ị na-agabiga na-enweghị ebe obibi Ihọd n'okporo ámá, cheta na ọ bụghị a dịghị onye. E nweghị ihe dị ka ihe a dịghị onye.
Anyị na-mara site na Chineke
Ndi onye ọ bụla mgbe ebe a babysit? M na obere nwa, na mgbe mụ na nwunye m chọrọ ịga on a ụbọchị na anyị nwere ka ịtọọ oge dị ka afọ atọ tupu otú anyị nwere ike inwe a babysitter. Ma anyị na-akwụ ndị na-elekọta nwa anyị mgbe anyị na-arahụ. Babysitters na-anya-ha na ihe nke di ha na-elekọta. Ọma niile e kere eke bụ Chineke na-elekọta. Na O na-eme Anya ya na ihe nile nke ọ, gụnyere nke gị.
Chineke mere abụghị naanị ike na ihe niile na mgbe ahụ ka ọ na-aga. Chineke maara ihe niile na-aga.
“My etiti e zonahụghị gị mgbe mere m na nzuzo. Mgbe m na-kpara ọnụ ke ogbu nke ụwa, anya-unu hu m unformed ahu.” (Psalm 139:15-16)
Ọ na-ekwu na ọbụna n'oge ọ nọ n'afọ Chineke hụrụ ya. N'ezie, mgbe ọ bụ na n'afọ dịghị onye ọzọ pụrụ ịhụ ya. Ha amaghị ọtụtụ ihe banyere ya ma. Ma Chineke na-ahụ ya, ọbụna mgbe o ka hà a ahuekere. Chineke na-elekọta ya, -enyere ya, ala na-akpa ya ọnụ.
Mgbe mụ na nwunye m chọpụtara na ọ dị ime, anyị gara na nke dọkịta ọzọ Monday. Na anyị nwere ike na-ama na-anụ a ụda obi otiti. Ọ bụ ya mere obere, ma Chineke hụrụ ya n'anya ma na-eme ya. Chineke hụrụ ya obere unformed ahu. Ọ dịghị ihe na ndibọhọ echiche Chineke.
Ọ bụrụ na Chineke chefuru ị, ị ga-amarakwa. Ọ na-emekwa anyị obi-eti na akpa ume na-eku ume.
Ọ dịghị onye n'ime anyị anaghị ahụ anya. Chineke na-ahụ anyị na amasị ya nnọọ ka ndụ anyị. Nke a kwesịrị a kasie anyị obi. Ọ dịghị ihe na anyị nwere ike na-aga site na Chineke na-amaghị. E nweghị ihe ịma aka ma ọ bụ imerụ. Chineke na-eche banyere ihe nile na-ewute gị. Ị na-adịghị na-alụ ọgụ maka uru-you're ama ịrịba.
Gịnị ma ọ bụrụ na ọkacha mmasị gị na-agụ egwú a na-akpọ aha gị pụta on TV, agaghị na-adị ịtụnanya? Ọbụna ma ọ bụrụ na ị dịghị mgbe ọ na ịma jijiji aka-ha, ọ ga-abụ nke na ha na dị nnọọ ma onye ị bụ. Olee otú ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị ịtụnanya na Chineke maara ndị anyị bụ. Kwesịghị na-ezu?
“Ubọchi nile chiri m e dere n'akwụkwọ gị tupu otu n'ime ha bịara na-adị.” (Psalm 139:16)
My papa m na-ekwu ụdị nile nke ihe m na gbara m ara. Otu ihe, ọ na-enyefekwa ọ bụla na nkwupụta m mere n'ime ụdị ụfọdụ nke iyi egwu. Ma ihe ọzọ ọ na-ekwu bụ, “Boy, M maara gị karịa ka ị ma onwe gị.” Ọ ga-eme ka m wee na-apụ ara. Ma mgbe ahụ, otu ụbọchị ka m ghọtara na ọ bụ ezi. Gịnị mere? N'ihi na m obere nwa ewu ụbụrụ enweghị ike ịghọta ihe ihe. Ma papa m maara.
Chineke maara ihe banyere anyị na ọbụna anyị na-amaghị n'ihi na anyị na Ya. Anyị obere ụmụ mmadụ ụbụrụ na-apụghị ịghọta ihe nile.
Ọ na-ekwu na Chineke maara ihe niile ọ ga-eme tupu o site n'ọmụmụ. Chineke nachi ihe niile na Ọ maara ihe nile. Ọ maara otú ọtụtụ ntutu dị n'isi-gi. Ọ maara ihe ị na-eche ugbu a. Ọ maara ihe ị ga-eme n'abalị a na echi. Naanị Chineke nwere ike maara ihe dị ukwuu banyere nile asaa ijeri mmadụ ndị na-.
Nke a bụ ihe mere anyị kwesịrị iji legara Bible na-agwa anyị ndị anyị bụ. N'ihi na Chineke bụ Onye kere anyị na Onye pụrụ ịgwa anyị. Ọ maara anyị nke ọma karịa anyị na-eme
Nke a bụ otuto! Ọ dịghị amasị anyị. Chineke mgbe ọ chọtara ihe si. Ọ ka na-na-ezighị ezi. Ọ na-mgbe anya. Ọ ka na-ama anya n'ime ihe ọ bụla. Ọ ka na-mere mkpebi tupu na-atụle ihe nile metụtara. Ọ maara ihe niile!
Adịghị a mee ka ị chọrọ ka obi Ya?
Ọ kwesịrị. Ma ka m na-ama kwuru okwu ya, ụfọdụ n'ime anyị na-eche kwa ukwuu nke anyị onwe anyị. Ma nke ahụ bụ n'ụzọ dị ukwuu n'ihi na anyị na-echefu ihe a atọ akụkụ. Anyị na-echefu na anyị na-na-agbajikwa.
Anyị na-abụghị nanị na ebube; anyị na-na-agbajikwa. The Bible na-ekwu, anyị na Chineke kere n'onyinyo Ya. Anyị bụ ndị enweghị ntụpọ, n'ụzọ zuru okè jikọọ Chineke. Ma mgbe nmehie batakwara n'ime uwa, ọ na-emetụta anyị niile. Na mgbe anyị na-enwe dum, ugbu a anyị na-agbajikwa. Anyị ọdịda dị ka ọmarịcha crystal ọkpụkpụ a na-ama esịn. Ọ bụ abọ. Ugbu a na e nwere ihe ọrịa, ọnwụ, na kasị njọ nke mmehie niile.
M dị nnọọ wee a iPhone adịchabeghị anya gara aga. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Ma tupu m na nke a ọhụrụ m iPhone bụ egwu. M ama esịn ya mgbe niile, otú ihuenyo e gbawara. Ọ bụ n'ezie onye na-adịghị. Mgbe ọ jiri on m. Achọghị m na-emefu ego na a ọhụrụ ma na. Ọ bụla ugbu a na mgbe ahụ, m ga-ejide onwe m mkpesa banyere otú egwu na ekwentị m bụ. Ma mgbe ahụ, m ga-echeta azụ otú ekwe ntị na-eji na-. The mbụ ekwentị m nwetara bụ otu n'ime ndị mbụ na agba hụ na i meziri. M chere na ọ bụ ịtụnanya.
Ma m messed elu iPhone bụ a ugboro nde mma karịa mbụ ekwentị m nwetara. M ga-aghọta na ọ nwere ike na-messed elu, ma ọ bụ ka ịtụnanya. Ọ nwere ike ngwa ngwa na gbawara, ma ị ka na-ahụ anyị mata otú ya amazingness. M nwere ike ka na-ezi ihe osise na ya. M nwere ike ka na-esi na Internet na ya. M ka pụrụ ibudata stof na ya. M nwere ngwa ọdịnala na egwuregwu na ya. Apple mere ihe dị ịtụnanya ọrụ on na ekwentị. Na ekwentị bụ ebube, ma agbajikwa.
N'otu aka ahụ, Chineke mere ihe dị ịtụnanya ọrụ on anyị, ma anyị na-agbajikwa. Ọ bụrụ na ị na-ele anyị, ị ka nwere ike ịgwa anyị na ihe magburu onwe ya e kere eke, ma ọ dịkwa doro anya na anyị na-agbajikwa. Anyị na-adịghị adịru mgbe ebighị ebi. Anyị na-arịa ọrịa ma na-anwụ. Anyị na-afụ ụfụ anyị na nkwonkwo ụkwụ. Anyị na-adịghị na-echeta mgbe stof maka ule. Anyị n'ize ndị ọzọ. Na anyị mere mmehie megide Chineke.
Ọ dị mgbe ị na-eche banyere na eziokwu na ị na-agbajikwa? Ọtụtụ n'ime anyị na-aga site ná ndụ anyị anya isi na anyị nnọọ mma. Anyị ina ghọgburu n'ihi na anyị na-adịghị ka ọ bụla dị iche iche karịa onye ọ bụla ọzọ nọ anyị gburugburu. Ma eziokwu bụ, anyị niile na-agbajikwa. Achọrọ m anya na abụọ bụ isi ụzọ na anyị na-agbajikwa.
mbụ, anyị na-ahụ agbajikwa. Mgbe ị dị na nwata anyị bi n'okpuru echiche na anyị na-eme nnọọ mma. Na na anyị nwere ike iche na n'ihi na anyị na-adịghị ahụ ihe ọ bụla ihe ịrịba ama nke anyị brokenness ma. Ma eleghị anya, obere ihe ịrịba ama, ma anyị eleghara ha. Ọ bụ dị ka mgbe nwunye m na-akwọ ụgbọala anyị Ford Explorer. Ọ malitere ime mkpọtụ, ma ọ nọgidere nnọọ na-akwọ ụgbọala ya. A izu ole na ole mgbe e mesịrị anyị kwọ ụgbọala na azụ Chesapeake Bay na wheel fọrọ nke nta kwụsịrị. Kama eleghara ihe ịrịba ama, anyị kwesịrị maara nke ha.
Otu onye na Bible bụ ndị e mere ka maara ihe ndị anyị dara n'ụwa bụ Job. Ihe niile e weere ya. Ke n'etiti abụ iru uju banyere ọnọdụ ya ọ na-egosipụta na ala ụmụ mmadụ ihe. Ebe a bụ ihe ọ na-ekwu:
“Mmadụ nke na-nwaanyị mụrụ nke bụ ole na ole nke ụbọchị na jupụtara ná nsogbu. Ọ na-apụta dị ka a ifuru wee kpọnwụọ; ọ na-agba ọsọ dị ka onyinyo na-aga n'ihu bụghị.” (Job 14:1-2)
Job na-ekwu na ụbọchị anyị na-adịghị enweghi ngwụcha. Anyị na-enweghị enweghi ngwụcha ọtụtụ afọ na-ebi ndụ. Anyị niile ga-anwụ ụfọdụ ụbọchị. Anyị nwere ike pụta mara mma dị ka a ifuru, ma anyị ga-akpọnwụ. Mgbe o kwuru okwu banyere anyị akpọ nkụ, ọ pụtara na anyị na ozu ga-eji nwayọọ nwayọọ mechie on anyị. Anyị mma ga-agwụ na njọ. Na ha adịghị mgbe niile na-aga na-arụ ọrụ dị ka nke ọma dị ka ha na-eme ugbu a. Na-emecha anyị ga-anwụ. Na mgbe ọ na-eji tụnyere anyị onyinyo, ọ na-ekwurịta okwu na ndụ a abụghị na-adịgide adịgide. Ọ na-abịa na njedebe.
M na-agụ a Time magazine isiokwu taa isiokwu: "Enwere Google dozie Death?"Isiokwu na-ekwu banyere oké ọchịchọ ụlọ ọrụ na otú ọ na-enwe mmasị gbaa maka ọnwa. E nweghị ego nke sayensị na nkà na ụzụ nke pụrụ idozi nsogbu nke ọnwụ. ọ na-eme. Ọnwụ bụ eziokwu nke Google apụghị idozi.
Ya mere, ee, anyị na-ebube. Anyị na-kasị ịtụnanya akụkụ nke ihe e kere eke, Ma kemgbe ndị Fall na anyị na-agbajikwa.
Anyị brokenness-echetara anyị na anyị na-adịghị Chineke. Anyị ekwesịghị iche na anyị ahụ nwatakịrị na-arụ ọrụ nke ọma ugbu a bụ ihe anyị ga-ruo mgbe ebighị ebi. Nke a bụ ezigbo ihe mere anyị ghara iche ruo mgbe e mesịrị na-ejere Chineke ozi.
Ya mere, ndị mbụ n'ụzọ anyị na-agbajikwa na ahụ. Kama anyị na-agbajikwa n'ụzọ ime mmụọ.
"Ọ dịghị onye bụ ezi omume, ọ dịghị, ọ dịghị otu onye; ọ dịghị onye na-aghọta; ọ dịghị onye oyomde Abasi. All ahapụwo; ọnụ ha na-abaghị uru; enweghị onye na-ezi, ọ dịghị ọbụna otu. Ha akpịrị bụ ili ghere oghe; ha na-eji ire ha na-aghọgbu. Elò asps dị n'okpuru egbugbere ọnụ. Ọnụ ha jupụtara ịbụ ọnụ na ilu. Ukwu-ha na-awụ ọsọ na-egbu; na ụzọ ha na-emebi ihe na nhụsianya, na n'ụzọ nke udo, ha na-amaghị. Ọ dịghị atụ Chineke egwu n'ihu ha. " (Ndị Rom 3:11-18)
A na-ekwu na akwụkwọ Ndị Rom ebe Paul amalite anya-ekwu otú onye ọ bụla mere mmehie ka mmehie megide Chineke. na ebe a, ebe a na-n'ụzọ bụ isi na-agwa ndị Juu, ee ọbụna gị. Anyị niile.
“N'ezie, ọ dịghị onye eziomume n'ụwa, nke na-eme ihe ọma na-adịghị emehiekwa.” (Ecclesiastes 7:20)
Ugbu a ihe mere anyị na-eche na anyị na-na na ezi ndị mmadụ bụ ụkpụrụ anyị tụrụ ya n'ihe: ibe. Ya mere, n'ezie tụnyere ndị ọzọ ndị mmadụ na m ezigbo mmadụ. M adịghị egbu ndị. Na na a-eyi ọha egwu. Ya mere, Na na na a ezigbo mmadụ, nri? Ọ bụghị dị ka Bible. Site mmadụ n'ọnọdụ, n'aka na ị pụrụ ịbụ ezi onye. Ma ihe anyị kwesịrị n'ezie inwe mmasị bụ echiche Chineke bụ.
Na ka anyị na-, n'ezie na anyị nwere ike na-arụ ụka na ya. Ọ bụ ihe niile ezi.
Na ị na-achọpụta na ọ na-eme ka ikpe na bụla akụkụ nke anyị na-messed elu-nghọta, akpịrị, asusu di iche iche, egbugbere ọnụ, ọnụ, ụkwụ, anya-anyị niile! Anyị na-adịghị mma ndị na-eme ihe ọjọọ mgbe ụfọdụ. Anyị na-eme mmehie ndị na-emehie mgbe. Anyị nwere ọrịa obi.
Anyị ga na-asị na anyị na-aghọta eziokwu a, ma ọ dịghị egosi na ndị otú anyị si ebi ndụ anyị. Anyị na-ekwu na anyị maara na anyị na-agbajikwa, ma anyị na-achọghị ikweta na anyị ziri ezi a ọnọdụ. Mgbe mmadụ ebubo anyị, anyị mbụ nzaghachi, kama inyocha onwe, bụ mgbe niile iji chebe onwe anyị. Ma eleghị anya, anyị na-dị nnọọ na-arụ ụka, ma ọ bụ ma eleghị anya, anyị ịta ha ụta kama. Ọ bụrụ na anyị na-aghọta na anyị na-agbajikwa, mgbe ahụ ma eleghị anya, anyị kwesịrị nnọọ inyocha onwe anyị mbụ. Ị na-ezughị, nke pụtara na ị pụrụ ịbụ na-ezighị ezi.
Ma ọ bụ otú banyere a-anyị na-eleda ndị ọzọ na mmehie ha. Dị ka ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime anyị na-adịghị tiwara mkpa nke otu Onye nzoputa. Ọ dịghị onye nwere ike ikwu na ha na-gị mma, na ị pụghị ikwu na ị na-mma karịa ha. Ha nwere ike ime ka njọ mmehie karịa gị, ma anyị na niile gbajiri mmehie na mkpa nke a zuru okè Onye nzoputa. ọbụna njọ, anyị adabere na anyị onwe anyị iji heaven.
Anyị nwere obi ma na-obi bụ ebe ihe niile na-abịa site. Ya mere, nke fọrọ nke nta ka a n'ite mmiri ndị na-ego n'anya nsí. Kwa iko ị wukwasi ya n'ime a ga na-nsí. Ya mere, iche na ndị dị iche iche iko bụ echiche gị, omume, ọchịchọ, na mkpebi. All nke e metọrọ emetọ.
Anyị na-mere-eji mehie na anyị na-echeghị na ọ bụ nnukwu ndibiat, ma ọ bụ. Sin bụ ihe na-eme anyị na Chineke ghara. Sin bụ ihe ga-eme ka anyị ghara ndu ebighi-ebi. Anyị nwere ike iche egwu mmadụ ma ọ bụ ihe isi ike ndị anyị ezigbo onye iro. Anyị ezigbo kasị njọ iro nke nwere ike ime anyị ndị kasị mmebi bụ anyị onwe anyị mmehie. Ihe ndị ọzọ ga-eme anyị n'ihi na a oge, ma n'ihi mmehie anyị, anyị nwere ike-ata ya ahụhụ ruo mgbe ebighị ebi. Ọ bụ mmehie ahụ nke na-eme ka anyị onye iro Chineke.
Ụfọdụ n'ime anyị na-eche na anyị na mgbe mpụ dị njọ. Ma nke kasị njọ mpụ nile nke Eluigwe na Ala bụ imehie megide Chineke. Ọ bụ nnọọ elu karịa n'ikike a uwe ojii, ma ọ bụ ndị president. Ọ bụ Chineke! Na ọbụna ma ọ bụrụ na anyị atụghị gburu, eziokwu ahụ bụ na anyị na-na-aghara ya ụgha bụ ka a heinous mpụ megide Chineke.
Anyị na-dị ka a gbajiri mirror. Anyị otú ahụ Chineke na, ma ọ bụghị dị ka anyị kwesịrị. Nke ahụ bụ ihe anyị na-mere ime. Kama anyị na-egosi ihe jọrọ njọ ekpu picture. Ịhụnanya atụgharịa agụụ ihe ọjọọ. A ọchịchọ inye atụgharịa anyaukwu. Inyefe Onwe amama n'ikpere arụsị. Ọ bụ mmehie niile, na Chineke kpọrọ asị ọ.
Anyị bụ ndị nọ ná mkpa
Nke ahụ bụ akụkọ ọjọọ. Gịnị bụ ozi ọma?
Anyị na-eche naanị ezi-aga Eluigwe, na ọ bụ eziokwu na a uche. Ma ọ dịghị onye n'ime anyị mma. Ya mere, anyị kwesịrị onye ọzọ na-enye anyị na ha ịdị mma. Na onye ahụ bụ Jizọs.
Nke a pụtara na anyị apụghị etinye olileanya anyị na anụ ahụ anyị ma ọ bụ mmụọ selves. Ha na-na tiwara etiwa na ga-ekwe ka anyị ala. Anyị na-adịghị mma. Anyị kwesịrị Jesus na-etinye anyị azụ ọnụ.
Ọ bụrụ na anyị na-dị nnọọ n'ụzọ ime mmụọ agbajikwa ma ọ bụ nanị ikpọkidem agbajikwa, ma eleghị anya, ọ ga-iyi ka na nnukwu nke a ndibiat. dị nnọọ ikpọkidem, ọ bụ ezi n'ihi na mgbe anyị nwụrụ na anyị na ezi. Ma ọ bụ nanị n'ụzọ ime mmụọ, anyị ga-agaghị abịara Chineke n'ihi na anyị ga-emeghi-anwụ. Ma nke ọ bụla anyị ga-eguzo n'ihu Chineke di nsọ ka onye na-njọ n'anya na mmehie anyị.
Ị ma na ị na-nọ ná mkpa na? Ọma ozi ọma ahụ bụ na i nwere ike a ga-azoputa. E nwere ihe a ka Onye Nzọpụta onye ruru mkpa kasị ukwuu anyị.
"Nzọpụta a hụrụ na ọ dịghị onye ọzọ, n'ihi na ọ dịghị aha ọzọ n'okpuru eluigwe nke e nyere ụmụ mmadụ, nke a ga-azọpụta. " (Ọrụ 4:12)
Jesus bụ nanị onye nwere ike iweghachi ihe a na-agbajikwa. Ọ bụ naanị na onye ahụ nke pụrụ hụ anyị na Chineke. Ọ bụ ihe anyị na nanị olileanya. N'ihi na ọ nwụrụ n'ihi anyị nnupu isi. Ọ si n'ili bilie. Anyị na-na kpaworo elu a ụgwọ. Jesus ụgwọ ya niile.
Ya mere, ka recap: onye ka ị bụ?
Chineke na-eche banyere anyị n'ihi na ọ mere ka anyị. Ọ na-ele ala ma ka na-amata anyị dị ka okpueze nke Ya e kere eke. Ma na-ahụ na anyị bụ egwu gbajiri. Anyị na-na mkpa nke Onye Nzọpụta.
I kwesịghị iche na ị bụ Onyeàmà ebe a taa n'ihi na ị na-arahụ chọọchị. Ọ bụrụ na ị n'ezie kwetara na ị na-agbajikwa, gị nke na ị wutere Chineke, na ị chọrọ onye nzọpụta. Ọ bụrụ na ị na-agaghị na-atụgharị site na mmehie. Ọ bụrụ na ị na-agaghị atụkwasị obi Christ, mgbe ahụ ị bụghị otu nwa Chineke.
Nke ọzọ nnọkọ, anyị Aga okwu banyere otú Chineke jiri mere anyị n'ime ezinụlọ ya. Ka anyị ikpe ekpere.
1. Olee otú eziokwu ahụ bụ na Chineke mere ka anyị ịgbanwe ndụ anyị? Ihe dị iche ọ ga-eme ka nke a izu?
2. Olee otú ọ na-agbanwe ndụ gị amara na Chineke na-ahụ ihe nile? Ọ dị uru nke ya, ya mee na Chineke maara anyị nke ọma ga?
3. Olee otú ọ na-eme ka i mara na ị na-aga ịnwụ otu ụbọchị?
4. Olee otú ime mmụọ anyị brokenness-egosi na ndụ anyị?
5. Eziokwu ahụ bụ na ọ dịghị onye n'ime anyị na-ezi pụtara na anyị dị nnọọ anabata ya ma na-ebi otú ahụ?
6. Gịnị n'ezie ka echegharị mmehie ma kwere na Jizọs?
Michael aru • March 4, 2014 na 9:46 pm • zaghachi
Gịnị dị egwu mpempe nghọta ma na-ezi. Gọzie ya
Allan • March 5, 2014 na 3:36 pm • zaghachi
Nke a bụ nnọọ good.May Chineke na-agọzi gị.
Glore • March 6, 2014 na 11:23 Abụ • zaghachi
ịhụnanya dị egwu. Anụla m gị maka music na nkà na na ubi oke. Great ozizi. Ike na-eche maka ọzọ.
Solomon King • March 12, 2014 na 6:27 pm • zaghachi
M na-eche gọziri agọzi, Gọzie m!
Ike na-eche maka mmechi akụkụ.
Chukwu gozie, njem.
MichaelSmith • March 14, 2014 na 12:34 pm • zaghachi
njem, na-ekele gị maka inwe ndị dị otú ahụ siri ike music na-ege ntị, na ekele maka ozizi ndị a. Ha anọwo na oké-ege ntị maka izi na agbamume, M ekpe ekpere ka Chineke na-agọzi gị, na na otu ụbọchị m ga-esi na-enweta a na-ezi onye.
Payne • March 19, 2014 na 7:06 Abụ • zaghachi
Nke a bụ oké! Mgbe a ga-esote 2 videos-tọhapụrụ?
Juan • March 19, 2014 na 10:49 pm • zaghachi
Great ozi njem lee ịhụnanya otú ị na-etinye ya niile ọnụ kwa-emetụ ya dị ukwuu mara na m na-mara mma mere Ka Chineke gozie gị na ndị ezinụlọ
Ariel • March 25, 2014 na 7:39 pm • zaghachi
Nke a bụ ndị dị otú ahụ a oké ozizi. Enyerela m ghọtara na m ụzọ iche echiche nke onwe m bụ n'ezie na-ezighị ezi. Chineke na-n'ezie iji ị!
Okwara Christian • April 23, 2014 na 1:16 Abụ • zaghachi
Crystal doro anya
Leo • December 11, 2015 na 10:43 pm • zaghachi
dị nnọọ mma, preachings na-eto eto mkpa!